I-5 * I-Fairytale Beach Getaway ye-2 e-Casa Turquesa - I-Airbnb
I-5 * I-Fairytale Beach Getaway ye-2 e-Casa Turquesa
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguAdriana
Ukubaleka kwentsomi. I-studio yothando kunye nokuphumla (igumbi elinye) kwi-2 enenkonzo engenakuphikiswa. IStudio ifana neparadesi entle ephambi kwechibi elijikelezwe yimithi yesundu. Isitudiyo sibonelela nge-spa yangaphakathi, ukuhlala kwabantwana, umpheki kunye neenkonzo zokuhamba ngentlawulo eyongezelelweyo. Inkonzo yokucoca (ngoMvulo-uLwesihlanu) ifakiwe xa uhlala ngaphezulu kobusuku obu-2.
Sinikezela ngenkxaso yomthengi we-24/7 ukulungiselela zonke iimfuno zakho.
A uthando intaka ukubaleka izibini honeymoon okanye Great ukuba izibini ukuchitha impelaveki ende kude nekhaya okanye nje ukuba abahlobo ukuya ukuhlola Yucatan ukusuka CanCun, Playa del Carmen okanye Merida.
Indawo entle yokuphumla kwaye uchithe ixesha kwindawo entle. Indawo emangalisayo ngaphakathi kweCasa Turquesa complex. Idama ekwabelwana ngalo (amanzi olwandle). Ikhaya lakho kude nekhaya. I studio inokufikelela ngokuthe ngqo elunxwemeni ukusuka kwi-complex.
Isetyenziswa nangabanye amanzi anetyuwa ipuli
Imithi yesundu emihle yekhokhonathi, ulwandle oluhle, iiNtaka zaselwandle ezininzi, iindawo zokutyela ezilungileyo zaselwandle, abantu abanobubele. Abasebenzi banobuhlobo kwaye baluncedo.
ISan Crisanto imnandi ukutyelela i-manglar epinki kunye nemfusa. IMotul liziko leMaya elimangalisayo elinentengiso entle, isidlo sakusasa esihle, iicenotes. Kufuphi yi-Izamal idolophu yomlingo eneendawo zakudala, iindawo zokutyela ezintle nokunye. I-Xcambo imnandi ukutyelela okanye uphumle nje kwilali entle yokuloba yaseTelchac Puerto.
Siyazama ukungabikho ngexesha. Sinabasebenzi abakhulu abakhathalela zonke iimfuno zethu zeendwendwe.